Jananinepal.comईश्वर बाबु र जुना गुरुङको प्रेममा भगवान निष्ठुरी बने पछि... - Jananinepal.com
जब “ए ! सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र” बोलको छोटो अडियो बाहिरियो, तब झ्वाट्ट सुन्दा म हिन्दी गीत “सुन् रहा हेन तु रोरहा हुँँ मे ” सँग भाव मेल खान्छ की भन्ने सोचाइमा रुमल्लिएको थिए । जब यही गीतको पूरा भिडियो सार्वजनिक भयो म हेरेको हेरै भएको थिए केही बेर अवाक रहे । पृथक परिवेश, यथार्थ भाव अनि समसामायिक बिषयवस्तुमा आधारित यो गीत सुन्दा मेरो भ्रमात्मक सोचाइ कहाँ बिलिन भो पत्तो पाइन । सुरु देखी अन्त सम्म एकाकृत भएर हेरिरहे परेली रसाइसकेछन् म बेहोसीलाई के थाहा । गीत सकिए पछि सुकसुकाउदै वाह ! क्या गीत भनेर पुन: दोहोराइ तेहेराइ हेर्न थाले ।
बाबा आमा बन्न पाउने सौभाग्य सबैको कहाँ हुन्छ र । एकै छिन् आँखा बन्द गरेर सोचौ त बाबा आमा बन्न के गर्नु पर्छ । म भन्छु – नयाँ नयाँ बिहे, नौलापौला बेहुला बेहुली, ताजा ताजा सम्बन्ध, मीठा मीठा सपना अनि उज्ज्वल भबिष्यको कल्पना । सुरु सुरुको लाज, नजिक हुँदाको डर, डर भित्र लुकेको अनौठो चाहना । बिस्तारै मौलाउदो विश्वाश, बढ्दो माया अनि घट्दो दुरी अनि त प्रेमको न्यानो अङ्गालोमा बाधिएर बितेको रात । त्यै रातको मिठो याद हुर्कन्छ आमाको मुटुमा प्रेमको चिनो सन्तान बनेर ।
आमालाई अमिलो र पिरो खाने चाहना । केही खान मन लाको छ भने भन है म जहाँ बाट खोजेर भएनी ल्याइदिन्छु, यो बेला मनको रहर अधुरो राख्न हुन्न रे बाबाको भनाइ । गाउँ घरमा कसैले मौसम अनुसार पाकेको नयाँ फल चखाउन खोजेनी झलक्क आमाको याद आएर ओहो ! यो बेलामा त उनलाइ पो खान मन लाको होला भनेर नखाइ घर ल्याइदिने बाबा अनि छाती चौडा पार्दै जुङ्गा मुठार्दै साने र ठुलेको अघि गफ लगाउदै बंश बिस्तारलाई निरन्तरता दिन पाउदाको गर्व ।
गह्रौं सामान उठाउन र गाह्राे काम गर्न नदिने भनेर बाबा नै जानी नजानी चुलो चौका घर व्यबहार सम्हाल्दै । कुन लुगा लगाए सहज अनि के खाए आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो, बाबाको मुख्य जिम्मेवारी । आमा हर दिन आफ्नो पेट सुमसुमाउदै सन्तानको हलचलको महसुस गर्न आतुर । अचानक बच्चाले लात्ती हानेको धक्काको महसुस आमा खुशीले “ए हजुर सुन्नु भो बाबुले कोल्टे फेर्दैछ” । अर्को दिन सुन्नुन बाबुले लात्ती हान्दैछ । आमाको पेटमा बाबाको कान लपक्कै लाग्छन् । जब सम्म धक्का महसुस हुदैन तब सम्म आशातित कानहरु बेचैन भैरहन्छन् । जब अलिकति हलचलको महसुस हुन्छ, खै कहाँ बाट बाबाको मुहारमा त्यति धेरै खुशी छाउँछ कुन्नि संसार जिते झै गरी उफ्रन सुरु । आमाका गाला अनि कपाल सुमसुमाउदै माया दर्शाउन सुरु, यस्तो लाग्छ बाबाको हर खुशी आमाको पेटमा रहेको सन्तानमा निहित छ ।
साथी भाई सँग बाबाको भेटघाट पातलिदो । साथी भाइको घुर्की – ओइ ! केहो आज भोलि त हाम्लाइ भेट्न कम गर्न थालिस् नि ? बाबाको जवाफ – बाउ बन्दैछु अब कहाँ सधै अल्लारे बनेर भो त ।
बाबा पारिलो घाममा बसेर आमाको कपाल कोरिदिदै । आमाको हात हमेशा पेटमै सुमसुमाउदै यस्तो लाग्छ कि बच्चाको शिर सुमसुमाउदै अशेष आशीर्वाद दिदै । बाबाले छोरी हुन्छे भन्ने आमाले छोरा । आमाले यो नाम राख्ने हो बाबाले त्यो नाम । आमाले डल्लु भन्छु बाबाले राजा भन्छु ।
ओइ साइली कति महिना चल्दैछ ? मुखिनी बजैको प्रश्नमा आमा लजाउदै शिर झुकाउदै अनि बाबाको जवाफ – नौ महिना । पुलुक्क बाबा तिर हेर्दै आमाले – पुरै दिन गनेर बस्नु भाछ कि के हो ? बाबा जिस्कदै बरु डाक्टरले गलत मिति तोकिदेला ज्यानलाई त रामरी याद छ त्यो रात । छि: तपाईं त – आमाको लाज ।
भित्ता भरी बच्चाहरुका पोस्टरहरु । घर भरी गुडिया र खेलौना हरु । छुनुमुनुको अनुहार कस्तो होला ? नाक बाबाको जस्तो आँखा आमाको जस्तो । हाइट बाबाको जस्तो अनि फराकिलो निधार आमाको जस्तो । हेर्दा हेर्दै आँगनीमा झोलुङ्गो टागिन सुरु भैसक्छ । सानो मान्छेको आगमनको कति तिब्र प्रतिक्षा । कति भब्य स्वागतको तयारी ।
यो प्रतिक्षाको अन्तिम पलमा आएर आमा र बच्चाको ज्यान तल माथि भयो भने के होला ? साच्चै भगवान निष्ठुरी बनिदिए भने के होला ? दैब निर्दयी बनिदिए के होला ? के स्विकार्न सक्ला त्यो बाबाले यति तितो सत्यलाई ? के सम्हाल्न सक्ला त आफुलाइ ? कस्ले देला उसलाई यो बज्रपात सहने शक्ति ? के बिर्सन सक्ला सङ्गै झोलुङ्गो हल्लाउने सपना देखेकी आफ्नी प्रियाालाई ? के दागबत्ती दिन सक्ला त्यो संसार देख्न नपाउदै रोकिएको सानु ढुकढुकीलाई ?
अब कल्पना बाट बाहिर आउनुहोस् । हो, ठ्याक्कै यही कथा वस्तुमा आधारित भएको यो गीतले करिब २० लाख भन्दा बढी स्रोता दर्सक को नजर मा परेको यो एकल लोकगीत हो – ए ! सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र ?
मर्छु बौलार …
ए सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र !!!
बिन्ती गर्छु म कोटी कोटी !
फर्किएर आइदेउन एक चोटि !!
सपनीमा झुर्लुक्क आन्छ्यौ ( आउछ्यौ ) !
एक छिन् पछि काँ जान्छ्यौ काँ जान्छ्यौ !!
तिमी आकाश म तल धर्तीमा !
उस्तै माया छ तिमी प्रतिमा !!
रात् दिन् छाती कटक्कै कटक्कै !
मन्ले भुल्न मान्दैन पटक्कै !!
स्वर : खेम सेन्चुरी
शब्द : गणेश के. सी.
यति समसामायिक बिषय परिकल्पना गर्ने गीतकार गणेश के. सी. , मुटु रेट्ने कारुणिक सङ्गीत भरेर भावमा डुबुल्की मार्दै आफ्नो कर्णप्रिय आवाजले सुनमा सुगन्ध थपिदिने लोकप्रिय सङ्गीतकार तथा गायक खेम सेन्चुरी, गीतलाई पूर्ण न्याय दिई उत्कृष्ट निर्देशन गर्ने निर्देशक कपिल लामा अनि काल्पनिक कथा बस्तुमा पनि हुबहु यथार्थ अभिनय गरी दर्शक श्रोताका परेली रसाउन बाध्य बनाउने मोडल द्वय ईश्वर बाबु र जुना गुरुङको खुलेर तारिफ गर्न चाहन्छु । पृथक सोच र फरक स्वादले पक्कै पनि नेपाली मन मुटुमा वास पाएको छ र अझै पाउने नै छ, यो अपार सफलताको लागि सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना ।
( यौटा सलाइको काँटीको झिल्काले औला पोल्दा ऐया ! भन्ने तिमी, आज सिङ्गै आगोले शरीर जलाउदानी किन कराउदिनौ ? किन बोल्दिनौ ?
ए ! सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र ? )
पूरा म्युजिक भिडियो:-